Guddiyada doorashooyinka Soomaaliya oo lagu wado in tababar loo bilaabo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Guddiyada doorashooyinka Soomaaliya oo lagu wado in tababar loo bilaabo
Guddiyada doorashooyinka Soomaaliya oo lagu wado in tababar loo bilaabo
Xubnaha gudiyadda doorashoyyinka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay soo xaroodaan ugu danbayn maalinta Khamista si loogu bilaabo tababar ku saabsan sidii ay u shaqeyn lahaayeen.
Arrinkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Waxaa uu guddoomiyaha xusay in intaasi kadib ay guda geli doonaan howlhoda doorashooyinka, iyaga oo ka bilaabi doona degaannada dowlad Goboleedyada dalka kajira iyo Gobolka Banaadir si loo qabto doorasho loo dhan yahay.
Xukuumadda uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa laga sugayaa qabashada doorasho loo dhan yahay oo dalka Soomaaliya ka dhacda, waxaana maalmaha soo socda magaalada Muqdisho & gobolada dalkaasi ka bilaaban doona ololo doorasho oo ay sameeynayaan Musharixiinta Xildhibaannada labada Aqal iyo kuwa Madaxweynaha.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Pakistan oo cabsi ka qabo in dagaal sokeeye uu ka billowdo Afghanistan